Yiwu Market Agent, Toys Buying Agent, eny ifotony Provider - Sellers Union
Torolàlana ho an'ny tsena Yiwu
Amin'ny maha Agent Yiwu matihanina anay dia afaka manome ny mombamomba anao rehetra ao amin'ny tsenan'ny Yiwu izahay. Manohana ny fividianana entana, fa farafaharatsiny 10.000 USD no ilaina hofenoina.
Raha manana hevitra momba ny vokatra ianao, saingy tsy mahalala ny fomba hamokarana azy, afaka mitarika anao tsikelikely izahay, mamolavola tetikasa vaovao ho anao. Nanampy mpanjifa marobe izahay hanatratra ny nofinofisin'izy ireo.
Afaka manome fonosana manokana izahay, famolavolana hanavahana anao amin'ireo mpifaninana. Ny fampidirana avy any Shina miaraka amin'ny marika anao dia afaka mampitombo ny tombony amin'ny fifaninanana.
Manana ekipa matihanina anglisy sy espaniola izahay, departemanta misahana ny loharanom-pahalalana manokana, departemanta antontan-taratasy, sampana fitantanam-bola, departemanta lozisialy fanatobiana entana, QC sns
Sells Union dia orinasa Sourcing Agent any Yiwu China miaraka amin'ny mpiasa 1200 mahery, natsangana tamin'ny 1997, indrindra ny fivarotana entambarotra sy kilalao ankapobeny. Nanangana birao tany Shantou, Ningbo, Guangzhou koa izahay. Maro amin'ireo mpiasanay no manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny varotra fanondranana entana, noho izany dia matihanina ampy izahay hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa isan-karazany. Ny vondrona misy anay dia nanorina fifandraisana ara-barotra marin-toerana amin'ireo orinasa sinoa mihoatra ny 10000 sy mpanjifa 1500 avy amin'ny firenena 120 mahery. Ny mpiara-miasa aminao azo antoka any Sina.
China Sourcing momba ny vokatra
Manampy anao amin'ny famokarana vokatra avy amin'ny tsena sy ny orinasa China amin'ny vidiny mirary, hanaraka ny famokarana, hiantohana ny kalitao sy ny fandefasana isan-trano. Izahay dia mikarakara ny dingana rehetra amin'ny fanafarana avy any Shina, manatsara ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
Ny efitrano fampirantiana an-tserasera
Vokatra mihoatra ny 500000 sy mpamatsy China 18000 ary afaka misafidy vokatra an-tserasera ianao. Raha liana amin'ny vokatra ianao dia mifandraisa aminay.
Ny efitrano fampirantiana ivelan'ny Internet
Maherin'ny 10000m², mampiseho zavatra maherin'ny 100.000 indray mandeha. Afaka manome efitrano fampisehoana mivantana sy tsena Yiwu mivantana ihany koa izahay raha mila izany.
1.Ataovy mivantana amin'ny Factory ny vidiny tsara indrindra. Tsy misy sarany miafina.
2. Ataovy ny fanaraha-maso ataon'ny orinasa ary diniho ny kalitaon'ny vokatra.
3.Ny trano fitehirizana 20.000, fanodinana entana maimaimpoana, atambaro ny entanao amin'ny mpamatsy samihafa.
4.Mahazo ny tahan'ny fandefasana entana tsara indrindra, fandefasana entana any amin'izay alehany ara-potoana.
5. Serivisy famerenana famolavolana vokatra feno araka ny takiana.
6.Manaova entana an'arivony ho an'ny fandefasana azy eo noho eo.
7. Vahaolana manokana momba ny fanondranana tokana ho an'ny rojo fivarotana lehibe, fivarotana dolara, e-varotra, mpivarotra ambongadiny sy marika sns.
8.A vita aorian'ny fanompoana.
Fanadiovana spaonjy Squeegee Window Scraper Shower ...
Ambongadiny Bluetooth, afangaro ny loko 4, f ...
2020 Penina fanadiovana toaka alikaola vaovao 5ml amin'ny H ...
Fitaovana fitehirizana hoditra kely azo itokisana manokana ...
Ampiasao matihanina Clear RTV Silicone Multi Function ...
Fomban'ny lamaody fanabeazana amin'ny fanabeazana lamaody mamoha kilalao M ...
Diaben'ny havoanan-jaza multifunctional vaovao tonga ...
Ankizy ambongadiny fanabeazana ankizy 100 pcs hazo B ...
Ny fivarotana lalamby vita amin'ny hazo haingam-bidy tsara indrindra 88 set ...
Yiwu Agent Yiwu Sourcing Agent Mpividy Agent...